Masinina welding PPR
Fitaovana fusion socket azo ampiharina azo ampiharina ampiasain'ny PP-R, PE, PERT, PB fantsona sy fittings. Tombony >> efijery fampirantiana nomerika tsy manam-paharoa, arakaraka ny fitaovana samihafa, dia afaka manitsy ny mari-pana mifanaraka amin'izany. >> Karazan-kazo manohana azo esorina, mihodina amin'ny lalana maro. >> Andiana wrench voatokana, mety ampiasaina sy entina. >> Rafitra fanaraha-maso marani-tsaina elektronika, afaka mahatsapa fanonerana mari-pana mandeha ho azy izy io. >> elanelam-bato misy ...
Sora-tarika SDC800 SDC1000 maro no nahitana
Ny fantsom-pandrefesana mandeha amin'ny herinaratra dia novokarina manokana ho an'ny fanomanana ny fizarana fantsona ao amin'ny PE, PP ary fitaovana thermoplastic hafa. Ampiasaina amin'ny famokarana kiho, tee, hazo fijaliana ary fametahana hafa. Fahafahana 630 ka hatramin'ny 1200mm OD. Ny zoro fanapahana dia hatramin'ny 67 degre. Ny tahan'ny fihenan'ny tsofa dia voafehy. Toy izany koa ny clamp V-ambony izay mitazona ny fizarana fantsona amin'ny toerany. Fampiasana sy fiasa: 1. Mety amin'ny fanapahana fantsona araky ny anjely voafaritra sy refy raha manao kiho ...
Kitapo tariby namboarina ho an'ny fanapahana ny tadin'ny tadiavina rehefa mihodina mampihena ny tees amin'ny alàlan'ny masinina fampifangaroana SDM315, SDM630, SDM1200. Na rehefa manamboatra fantsom-pivezivezy tanana. Manapaka ny fantson'ny fantsona amin'ny tadin'ny marina ho an'ny fantsom-pivoahana 63mm ka hatramin'ny 315mm. >> Radius saw dia ampiasaina hanapahana ireo fantsom-boaloboka ampiasaina amin'ny famokarana fihenan'ny teine ​​sy manifold. >> Toeram-piasana tokana ao anatin'izany ny tsofa tarika namboarina sy ny jig outlet azo ovaina amin'ny fantsom-batana 315mm ka hatramin'ny 1000mm. >> Manapaka Pipe ...
Kitapo tariby namboarina ho an'ny fanapahana ny tadin'ny tadiavina rehefa mihodina mampihena ny tees amin'ny alàlan'ny masinina fampifangaroana SDM315, SDM630, SDM1200. Na rehefa manamboatra fantsom-pivezivezy tanana. Manapaka ny fantson'ny fantsona amin'ny tadin'ny marina ho an'ny fantsom-pivoahana 63mm ka hatramin'ny 315mm. >> Radius saw dia ampiasaina hanapahana ireo fantsom-boaloboka ampiasaina amin'ny famokarana fihenan'ny teine ​​sy manifold. >> Toeram-piasana tokana ao anatin'izany ny tsofa tarika namboarina sy ny jig outlet azo ovaina amin'ny fantsom-piraherezana 63mm ka hatramin'ny 315mm. >> Manapaka Pipe Di ...
SDC315 SDC630 maro zoro tariby nahita
Ny fantsom-pandrefesana mandeha amin'ny herinaratra dia novokarina manokana ho an'ny fanomanana ny fizarana fantsona ao amin'ny PE, PP ary fitaovana thermoplastic hafa. Ampiasaina amin'ny famokarana kiho, tee, hazo fijaliana ary fametahana hafa. Fahaizana 90 ka hatramin'ny 315mm OD. Ny zoro fanapahana dia hatramin'ny 67 degre. Ny tahan'ny fihenan'ny tsofa dia voafehy. Tahaka ny fehy famatorana ampiasaina hitazonana ny fantsom-pipa amin'ny toerana. Fampiasana sy fiasa: 1. Mety amin'ny fanapahana fantsona araky ny anjely voafaritra sy refy raha manao kiho, tee na cro ...
Takelaka angon-drakitra teknika: milina fanapahana fantsom-pahaizana, fanapahana marina kokoa ary asa mahomby kokoa. mora entina. Ny lanjan'ny milina iray manontolo dia 7.5 kg. Ny maodely 220 dia afaka manapaka fantsona amin'ny 15mm ~ 220mm amin'ny savaivony. Ny hatevin'ny rindrin'ny fantsom-by dia 8mm, ny hatevin'ny fantsom-plastika dia 12mm, ary ny hatevin'ny vy tsy mitongilana dia 6mm. Tsy misy tabataba na fitaratra mandritra ny fanapahana. Milamina tsy misy burrs ny tampon'ny fanapahana, tsy simba ny taolana, ary ny hafainganam-pandeha dia ...
Extruder tanana plastika
Takelaka angon-drakitra teknika: maodely: TOSIKARATRA SDJ3400: 220V Herin'ny môtô manaparitaka: 1300W Metabo Herin'habakabaka: 3400W Lesiter Welding Rod Heating Heating: 800W Extruding Volume: 2.5kg / h Welding Rod Diameter: ф3.0mm-4.0mm, 5.0mm mety ho namboarina Hand extruder basy matetika ampiasaina amin'ny welding HDPE, PP, PVDF ary fitaovana hafa miempo mafana amin'ny tetikasa toy ny tanky plastika, fantsom-plastika, fitoeran-plastika ary ravina plastika. Model SDJ3400 TOSIKARAT 220V ± 5% Frequency 50 / 60Hz Hot Air Blower ...
Fampiharana sy modely an'ny endri-javatra: SUDG800 TOSIKARATRA: 220V / 110V Herin'aratra: 800W / 1000W Frequency: 50 / 60Hz Material Welded: PE / PP / PVC / EVA / ECB Welded Material Thickness ： 0.2mm-1.5mm Silicon pressure pressure sy vy pressure pressure tsy voatery. Ny volo mafana varahina sy vy mafana vy dia tsy voatery. Double default wedge default ary tokana mafana tsy voatery. Takelaka angon-drakitra teknika: Modely SUDG800 famaritana Geomembrane Welding Machine Voltage 220V (Ekena namboarina) Frequency 50 / 60hz Power 8 ...
Fampiharana sy Feature electrofusion welding machine dia mety amin'ny fampifandraisana ireo fantsona PE sy fittings miaraka amin'ny kopia izay ampiasaina amin'ny famatsian-tsolika sy rano. 1.Design ary araka ny fenitra iraisam-pirenena momba ny electro-fusion ISO12176. 2.Ny haavo MCU avo lenta dia ampiasaina ho toy ny fotony fanaraha-maso, misy fampisehoana LCD, azo aseho ny masontsivana welding rehetra 3.Lavy maivana, fandidiana mora. 4. Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny toe-javatra tena izy, ny fizotran'ny fikajiana tsy ara-dalàna dia azo esorina ao anatin'ny fotoana fohy. 5.Niorina ao ...
Fampiharana sy ny endri-javatra 1.Welding Type: marindrano mitsivalana sy fantsom-pandehanana. Rafitra fanaraha-maso ny tontonana PLC, afaka manitsy ny mari-pana fanafanana, ny fotoana ary ny tsindry arakaraka ny masontsivana entina manodina., Mety amin'ny takelaka thermoplastic mihodina sy mihodina vita amin'ny HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH …… 2. Rafitra fanaraha-maso Siemens PLC, efijery 7-inch touch-Siemens. 3.Fioran'ny birao vaovao, rafitra fandefasana azo itokisana, miorina amin'ny asa ary avo lenta amin'ny pe ...